भूगर्भीय सर्पिल ड्रिल रॉडमा उच्च टोक़ प्रदर्शन छ, जुन एकल स्क्रू ब्लेड वा डबल हेलिकल ब्लेडको साथ प्रयोग गरिन्छ। यो विशेष भूवैज्ञानिक स्टील र उन्नत घर्षण वेल्डिंग विधि अपनाउने।
टेपर्ड ड्रिल रडहरू मुख्यत: ड्रिलि blast ब्लास्टि hole प्वाल, रेलिंग प्वाल, हिमाली सुदृढीकरण, एंकरिंग र खान, क्वारिज, उच्च मार्गहरू, रेलवे इत्यादिमा अन्य ईन्जिनियरिंग प्वालहरूमा प्रयोग हुन्छ। उच्च झुकने तनावमा, रक ड्रिलबाट ड्रिलिंग बिटमा पर्कसन उर्जा स्थानान्तरण हुन्छ र त्यसपछि चट्टानमा।
थ्रेड ड्रिल रडहरू मुख्यत: ड्रिलि blast ब्लास्टि hole प्वाल, रेलिंग प्वाल, हिमाली सुदृढीकरण, एंकरिंग र खान, खदानहरू, अग्लो मार्गहरू, रेलवे इत्यादिमा अन्य ईन्जिनियरिंग प्वालहरूमा प्रयोग हुन्छ।
शान्क एडेप्टर सबै प्रकारका ड्रिलिंग मेशीनहरू फिट गर्न मिल्छ, दुवै वायमेटिक र हाइड्रोलिक। शान्क एडेप्टरको कार्य घुमाउने टोक़, फिड फोर्स, प्रभाव उर्जा र फ्लिलि medium माध्यम मध्यम ड्रिल स्ट्रिंगमा प्रसारित गर्नु हो।
घुमाउने चक बुशिंगको लागि लाभ प्रदान गर्न हेक्सागोनल चक सेक्सनको साथ जिमारपोलको टेपर्ड ड्रिल रॉड। यसमा सामान्यतया रक ड्रिलमा उचित श्या stri्क स्ट्राइकि face अनुहार स्थिति, र अन्तमा टेपर्ड ड्रिल बिट कायम राख्नको लागि जाली कलर हुन्छ।
हामी प्रायः विश्वास गर्छौं कि एक व्यक्तिको चरित्रले उत्पादको 'उच्च गुणस्तर, विवरणहरू ब्यबहारले उत्कृष्ट' निर्णय गर्छ, चीन सिरेमिक लाइनदार पाइपको उद्धृत मूल्यको लागि वास्तविक, प्रभावशाली र नवीन कर्मचारीको भावनाको साथ, हामी भविष्यको लागि हामीलाई कल गर्न शब्द वरिपरि संभावनाहरूलाई स्वागत गर्दछौं। सानो व्यवसाय अन्तर्क्रिया। हाम्रो उत्पादन र समाधानहरू सबै भन्दा राम्रो हो। एक पटक चयन गरियो, सधैंको लागि आदर्श!
अब हामीसँग उत्कृष्ट उपकरणहरू छन्। हाम्रो समाधानहरू तपाइँको संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र अन्य मा निर्यात गरिएको छ, चीन खनिज Yt28 Yt29A एयर हथौड़ा रक ड्रिल को लागी चीन गोल्ड आपूर्तिकर्ता को लागी ग्राहकहरु बीच एक शानदार नाम का आनंद, तपाइँको छानबिन स्वागत छ, सबैभन्दा प्रभावकारी सेवा सम्भावित पूर्ण हृदयले प्रदान गरिनेछ।
सबै ह्यान्डहेल्ड ड्रिलिंग अपरेशनहरूको लागि आदर्श उपकरणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? जिमारपोलको रक ड्रिलहरू तपाईंको उत्तम विकल्प हो। तिनीहरू एक सुव्यवस्थित डिजाइन, कम हावा खपत र ह्यान्डल गर्न सजिलो प्रस्ताव। त्यो सुविधाहरूको साथ, तपाईं एक उच्च प्रदर्शन, मजबूती र कम मर्मत लागतमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।